Gịnị bụ Patreon na olee otu o si arụ ọrụ? | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe na otu Patreon si arụ ọrụ?
José Ignacio | | CMS na Teknụzụ, Nkuzi na akuru
Otu n'ime ajụjụ ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ịjụ bụ etu Patreon si arụ ọrụ yana otu o si emetụta mmepe ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa gị n'ịntanetị. Ọfọn, site na nke a, nke a bụ ikpo okwu dijitalụ nke na-enye azịza dị iche iche nye ndị nnata ma nwee ike idozi nsogbu ndị ọzọ na omume ha site ugbu a gaa n'ihu.
Maka na, Patreon bụ ikpo okwu nke ndị na-emepụta ọdịnaya na ndị na-ese ihe gburugburu ụwa nwere ike irite uru na ndị na-eso ụzọ ha. Gbanye Patreon Onye ọ bụla nwere ike itinye obere ego site na itinye ego ma ọ bụ ịba ụba mmadụ, yabụ onye na-ese ihe nwere ike ịga n'ihu n'ọrụ ya.
Dika o doro anya na nkowa ya, nke a bu ikpo okwu di na ntanetị nke metutara ego nke oru, tinyere nke dijitalụ, ebe o nweghi ike obughi. Ọ bụ ezie na site na echiche dị iche karịa nkwado ndị ọzọ nwere njirimara ndị yiri ya, dịka ị ga-enwe ike inyocha site ugbu a gaa n'ihu.
1 Patreon: olee otu o si arụ ọrụ?
2 Otu esi esonye na sistemụ a
3 Na profaịlụ akọwapụtara
4 Onyinye ndị ọzọ sitere na ọrụ a
Patreon: olee otu o si arụ ọrụ?
Nke mbu, odi nkpa imesi ike otu o si aru oru ka i we rita uru ha na oru oma puru iche. Ọfọn, n'echiche a, ekwesịrị ịdeba na n'elu ikpo okwu ọhụrụ a, mmadụ ọ bụla nwere ike nye obere ego site n'enye ego ma ọ bụ ịba ụba mmadụ, ma si otú a nnata ma ọ bụ ndị ọrụ nọ n'ọnọdụ zuru oke iji gaa n'ihu n'ọrụ ha. Nke ahụ bụ, ọ ga-abụ a ụdị ụgwọ na ndị na-eso ụzọ ha ga-ewepụta onwe ha.
Ndị okike, ozugbo ha tinyechara aha ha na Patreon, ha aghaghi ichoputa ma ego ha g’eme kwa ọnwa ma obu site n’okike (akwụkwọ, ihe ọchị, wdg), na mgbakwunye na ịde ederede na-akọwa ndị nwere ike ịkwado otu akaụntụ Patreon ha ga-esi rụọ ọrụ yana ihe ha na-enye.
Mfe. E nwere ụdị ndị ọrụ abụọ edebanyere aha ha n'elu ikpo okwu: ndị okike yeso ụzọ. N'ime mmekọrịta nkwado a, ndị okike na-enye ndị na-ese ihe ọrụ ha ọrụ maka mgbanwe nke na-agaghị ekpebi ọrụ ahụ. Nke ahụ bụ, arụ ọrụ (ihe ọ bụla njirimara ya) emeelarị ma ọ chọghị nchịkọta maka onwe ya mana ka ikwe ka onye okike ọdịnaya mepụta mgbe niile. Nke a abụghị ikpo okwu igwe mmadụ!
Ndị okike nwere ike ịnata ego n'aka ndị na-eso ụzọ n'ụzọ abụọ, ma jiri ego ndenye aha ma ọ bụ dị ka onyinye otu oge maka otu ọrụ. N'ime ego a, ọnụ ụzọ ahụ na-etinye 5% nke ụgwọ ọ bụla.
Ọ bụghị n'ezie ihe ọhụụ na onye na-ese ihe na-enweta enyemaka ego iji nwee ike ịmalite ọrụ ya. Ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-enwetabeghị nkwado nke ndị a ma ama na ndị amaala masịrị ha. Agbanyeghị, n'adịghị ka mgbe ahụ, nkà ihe ọmụma nke Patreon.com abụghị iji kwado ọrụ iji nweta ya kama nye aka na onye na-ese ihe nke mere na ị ga-aga n'ihu na-enye ọdịnaya gị.
Otu esi esonye na sistemụ a
Ozugbo e debanyere aha, nweta profaịlụ ọrụ gị. Na mbu, Patreon ga-atụ aro ụfọdụ ọrụ ndị ama ama maka gị. N'aka nke ọzọ ị nwere ike tinye aha ọrụ ahụ ịchọrọ ịkwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ịnweghị onye omenkà akpọrọ n'uche, chọọ site na isiokwu. Pịa na foto profaịlụ gị n'akụkụ aka nri elu iji nweta menu ndenye. Họrọ "Explore Creators" ị ga-enweta ihuakwụkwọ ọhụụ. N'ime ya ị nwere ike inyocha ọrụ ọhụụ gbasaa n'akụkụ akụkụ dị iche iche nke Patreon. Ndepụta a gụnyere Top 20 nke mpaghara ọ bụla.
Na profaịlụ akọwapụtara
Pị n'ọrụ ga-akpọrọ gị peeji nke okike dị mkpa. Lee ndị omenkà. Na ngalaba ozi ị ga-ahụ mbipụta niile. A gaghị ele ọtụtụ n’ime ha anya ebe ọ bụ na a na-akwụ ha akwụkwọ, naanị maka ịkwụ ụgwọ ndị debanyere aha. Ndị okike na-eziga ọdịnaya n'efu na nyiwe ndị ọzọ, dịka YouTube. Kama nke ahụ, ha na-ebipụta akwụkwọ a na-ebibeghị na Patreon; mgbe ụfọdụ ha na-enyekwa ohere ọrụ gị na mbụ karịa na nyiwe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị pịa na nhọrọ "Bụrụnụ Onye Nlekọta ” (bụrụ onye nkwado) ị ga - esonye na ndị na - akwado ego.
Patreón bụ usoro ndị otu na - eme ka ndị okike kwụọ ụgwọ ha. Otu n'ime omume anyị bụ itinye ndị okike n'ọnọdụ mbụ, usoro ndị a na-anwa ime nke ahụ. Anyị maara na ọtụtụ mmadụ na-eleghara usoro ojiji anya n'ihi na ha na-agwụ ike, mana anyị emeela ike anyị niile iji mee ka ọ dị mfe nghọta. Na ngalaba nke ọ bụla anyị ga-achikota akụkụ ndị kachasị mkpa, mana nchịkọta ndị a abụghị iwu metụtara iwu, yabụ biko lee akụkụ ederede zuru ezu ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ.
Ndị a bụ usoro ojiji nke Patreon, ha na-emetụta ndị ọrụ niile nke ikpo okwu Patreon. "Anyị", "nke anyị" ma ọ bụ "anyị" na-ezo aka Patreon Inc. na ndị enyemaka anyị. "Patreon" na-ezo aka na ikpo okwu a na ọrụ anyị na-enye.
Site n'iji Patreon, ị kwenyere na usoro ndị a na iwu ndị ọzọ anyị na-ede. Biko gụọ ha nke ọma ma mee ka anyị mara ma ị nwere ajụjụ ọ bụla. Maka ozi gbasara omume data anyị, lee Amụma nzuzo anyị, gụnyere Iwu Kuki anyị. Anyị nwere ike ịnakọta ma jiri ozi gị dabere na iwu ndị ahụ.
Iji mepụta akaụntụ ị ga-abụrịrị afọ 13. Iji sonyere onye okike dịka onye nkwado, ma ọ bụ nye onye kere ihe, ị ga-adị afọ 18 ma ọ bụ nwee ikike nne na nna.
Na-ahụ maka ihe niile na-eme ma mmadụ banye na akaụntụ gị, yana nchekwa ya. Kpọtụrụ anyị ozugbo ọ bụrụ na ịchọrọ na akaụntụ gị adịghị mma. Nwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ gbasara nchekwa na ibe anyị Iwu Nche ...
Iji bụrụ onye okike, mepee ibe gị iji bido otu. Ndị otu bụ maka ndị ọkacha mmasị gị. You na-akpọ ha ka ha bụrụ akụkụ nke ihe na-atọ ụtọ nke na-enye ha uru pụrụ iche ha chọrọ, dị ka ịnweta mgbakwunye, ngwa ahịa, iche iche, na ahụmịhe na-emetụta. Na nloghachi, ndị na-akwado ha na-akwụ ụgwọ na ndenye aha ha.
Dịka onye okike, ị na-eme ka ndị otu gị dị na Patreon, anyị na-enyekwa ndị na-akwado gị ego na ndenye aha. Anyị na-ejikwa ụgwọ ịkwụ ụgwọ dịka aghụghọ, nkwụghachi ụgwọ, na mkpebi esemokwu ịkwụ ụgwọ.
Enwekwara ike igbochi ma ọ bụ gbochie ịkwụ ụgwọ maka mmebi nke iwu gị ma ọ bụ maka ebumnuche nnabata, gụnyere nchịkọta ozi ịkọ ụtụ. Mgbe ịkwụ ụgwọ na-abịaghị n'oge ma ọ bụ na-egbochi, ha na-agbalị ịgwa gị ihe kpatara ya. Iji chebe ndị okike, anyị nwere ike igbochi ịkwụ ụgwọ ndị ahịa ma ọ bụrụ na anyị kwenyere na ha bụ wayo.
Oge ụfọdụ mmemme dị ka nkwụghachi nwere ike ime ka itule akaụntụ gị ghara ịba uru. Ọ bụrụ n ’itule gị wee bụrụ ihe na - adịghị mma, anyị ga - enweta ego ndị ahụ maka ịkwụ ụgwọ n’ọdịnihu.
Dịka onye okike, enwere ụgwọ abụọ metụtara ndị otu gị na Patreon. Nke mbu bu ugwo ikpo okwu, nke di iche dabere n’onodu oru i hotara. Nke abụọ bụ ụgwọ nhazi ịkwụ ụgwọ, nke dabere na ego nke onye okike họọrọ.
Ọnụ ego ịkwụ ụgwọ dollar US bụ 2,9% gbakwunyere $ 0,30 maka nkwa ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma maka nkwa karịrị $ 3, yana 5% gbakwunye $ 0,10 maka nkwa ọ bụla na-aga nke ọma maka nkwa nke $ 3 ma ọ bụ obere. PayPal ịkwụ ụgwọ site na ndị na-abụghị ndị ahịa US nwere ego ọzọ nke 1%. Ndi oru okike nwere ugwo ihe omuma ha na ugwo ugwo ugwo ihe nketa ha. Ego ịkwụ ụgwọ ihe nkwụnye ụgwọ dị iche iche dabere n'ọtụtụ ihe, gụnyere ego nke ndebanye aha ndị otu, ụdị kaadị, na ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ ndị ọrụ sonyere.
Ego nhazi ịkwụ ụgwọ euro bụ 3,4% gbakwunyere 0,35 3 maka nkwa ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma maka nkwa nke ihe karịrị 5 euro, na 0,15% gbakwunyere euro 3 maka nkwa ọ bụla na-aga nke ọma maka nkwa nke 3,4 euro ma ọ bụ obere. Ego ịkwụ ụgwọ ụgwọ dị oke bụ 0,35% gbakwunyere £ 3 maka nkwa ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma maka nkwa karịrị £ 5, yana 0,15% gbakwunyere 3 XNUMX maka nkwa ọ bụla aga nke ọma maka nkwa nke £ XNUMX ma ọ bụ obere.
Dabere na ọnọdụ ndị ahịa gị, ụfọdụ ụlọ akụ nwere ike ịgba ndị ahịa gị ụgwọ azụmahịa mba ofesi maka ndenye aha ha. Patreón anaghị achịkwa ụgwọ a, mana ọ na-adịkarị ihe dịka 3%.
Imirikiti ịkwụ ụgwọ ụtụ isi anaghị edozi, mana ha na-anakọta ozi njirimara ụtụ isi ma kọọrọ ya ndị isi ụtụ isi dịka iwu chọrọ. Ebe onye ọrụ gị na-ahụ maka mkpesa ụtụ isi ọ bụla, ịnwere ike ịnweta ozi ndị ọzọ na Helplọ Ọrụ Enyemaka Taxtụ anyị.
Naanị ụtụ ha na-arụchitere gị maka gị bụ ịkwụ ụgwọ VAT maka ọrụ enyere ndị ahịa EU n’ekwe ntị. Maka ebumnuche nke ọrụ elektrọnik, ndị okike na-enye anyị ọrụ ndị ahụ, mgbe ahụ anyị na-enye ha ndị ahịa. Iji mụtakwuo banyere otu anyị si ejikwa VAT, biko lee ntuziaka VAT anyị.
Anyị anaghị ekwe ka ihe okike na uru mebie usoro iwu anyị. Can nwere ike ịmụtakwu ihe site na ịga na ntuziaka Obodo anyị na Ntụziaka Uru. Nchịkọta nke iwu ndị ahụ bụ na anyị anaghị ekwe:
Ihe okike ma ọ bụ uru na-akwadoghị
Okike ma ọ bụ uru ndị na-akparị ndị ọzọ.
Okike ma ọ bụ uru ndị na-eji akụ ọgụgụ isi nke ndị ọzọ, belụsọ na i dere ikike iji ya, ma ọ bụ ojiji iji ojiji ziri ezi echebe gị.
Ihe okike ma obu uru ndi mmadu na-enwe mmekorita.
Uru ndị metụtara raffles ma ọ bụ ihe nrite ndị dabere na ndapụta.
Ọ bụrụ na enwere ndị na-erubeghị afọ 18 n’etiti ndị Fans gị, chetara ha na ha chọrọ ikikere isonyere ndị otu gị, na ndị na-erubeghị afọ 13 enweghị ike iji Patreon. Anyi ekwesighi ka mmadu ma obu otu ndi mmadu nye gi aka.
Dịka onye okike, ị bụkwa ọrụ maka idobe data onye ọrụ. Nwere ike ịhụ ihe achọrọ na Nkwekọrịta Usoro Nhazi. Ejikọtara akaụntụ gị na imepụta ihe okike gị ma enweghị ike ree ma ọ bụ bufee ya maka onye okike ọzọ.
Onyinye ndị ọzọ sitere na ọrụ a
Na-ada ezigbo mma? Ọfọn, n'ihi na ha kpọmkwem otú ndị a nhazi ụgwọ a ga-ebubo ka ahịa - 2,9% + $ 0,35 ka onye ọ bụla nkwa - ya ga na-budata ọzọ ọnụ ahịa na-akwado iche iche dị iche creators na nkwa nke $ 1 na $ 2 kwa ọnwa ma ọ bụ kwa ọnọdụ. Nke a bụ ihe iyi egwu nye ịdị uchu nke ndị okike Patreon, ọkachasị ndị okike na-adabereghị na obere onyinye.
Mgbanwe ahụ amaliteghị ozugbo, ma mmebi ahụ mebiri. Ndị okike juputara na soshal midia na nseta ihuenyo nke mmeghachi omume nke ndị ahịa ndị kagbuola onyinye ha na atụmanya iwu ego ọhụrụ. Site na ndị nkwado na ndị okike jikọtara ọnụ na-akatọ ụgwọ ọhụrụ ahụ (nke a haziri maka Disemba 18), Patreon mere ihe ịtụnanya na ịtụnanya maka ndị jirila mara na njedebe nke nnyefe akụnụba. Elu: rịọ mgbaghara ma kwupụta na agaghị emejuputa atumatu ohuru ohuru.
Anyị anụwo ya nke ọma na nke ọma. Anyị agaghị emejuputa mgbanwe na usoro ịkwụ ụgwọ anyị nke anyị kwupụtara n’izu gara aga. Anyị ka ga-edozi nsogbu ndị mgbanwe ndị ahụ lebara anya, mana anyị ga-edozi ha n'ụzọ dị iche, anyị ga-esokwa gị rụọ ọrụ iji nweta nkọwa, dịka anyị kwesịrị ịmeworị oge mbụ. Otutu n’ime unu tufuru ndị ahịa, i funahụkwara ego. Enweghị mgbaghara ga-eme maka nke ahụ, mana enwere m mwute na agbanyeghị. Ọ bụ nkwenye anyị kwenyere na ị kwesịrị inwe mmekọrịta gị na ndị Fans gị. Ndị a bụ azụmahịa ha, ha bụkwa ndị na-akwado ha.
Nkwupụta ya kwubiri “Daalụ maka ị n’iru na -emepụta. Anyị bụ ihe ọ bụla na-enweghị gị, anyị makwaara ya. Ndị okike na-agba mbọ ịnọrọ n'ụwa a na-eri anụ enwebeghị ọtụtụ mmeri n'oge na-adịbeghị anya, n'ihi ya, nkwenye na-enweghị atụ nke Patreon ga-abịa dịka ntakịrị mmụba nke omume. Ma gịnị mere eji chọọ mgbanwe a na mbụ? Ka anyị gafee saga niile ahụ wee hụ ihe anyị ga-amụta na ya.
Na nzaghachi na mbido iwe na nchekasị sitere n'aka ndị okike, Patreon kwuru na ha na-eme mgbanwe ahụ iji lebara okwu anya na ndị okike nwere ndị na-akwado ha bụ ndị na-enye aka ịghọ ndị na-enye onyinye kwa ọnwa, na-enye ha ohere iwere ọdịnaya pụrụ iche n'aka onye okike. kagbuo "ndenye aha ha" tupu ọnwa mbụ nke ọnwa ịgba ụgwọ dị. Iji dozie nke a, Patreón chọrọ ịkwaga na usoro nke ndị ahịa na-akwụ ụgwọ mbụ ("ụgwọ mbụ") maka ịnweta ọdịnaya nke onye okike wee kwụọ ụgwọ kwa ọnwa maka nkwado ha gara n'ihu.
Agbanyeghị, mgbe Patreon hapụrụ ụfọdụ ndị okike ahọpụtara ka ha gbanwee na sistemụ ịgba ụgwọ a, ndị ahịa mere mkpesa, n'ihi na ọ na-ewute ndị, dịka ọmụmaatụ, debanye aha maka Patreon mmadụ, kwụọ $ 5 wee kwụọ ụgwọ $ 5. ọzọ na nke mbụ Disemba. Iji dozie nke a, Patreon chọrọ ịkwaga na sistemụ nke na-arụ ọrụ dịka ọtụtụ ọrụ ndenye aha: onye zụrụ ya na-akwụ ụgwọ ọnwa mbụ tupu oge ọzọ yana kwa ụbọchị ncheta kwa ọnwa nke ụbọchị ndenye aha mbụ. Mana ime nke a ga - ezite ụgwọ nhazi ịkwụ ụgwọ nke ndị okike na-arị elu; inwe ndị ahịa na-akwụ ụgwọ na ncheta nke ndebanye aha ha kwa ọnwa karịa nke ọnwa mbụ na -emepụta ọtụtụ azụmahịa ndị ọzọ na ya mere ọtụtụ ikpe ndị ọzọ ebe onye na-akwụ ụgwọ na-ewepu. Ọ bụ nkwenkwe anyị bụ isi na ndị ọrụ nke ikpo okwu a nwere ike inye onyinye karịa ka a tụrụ anya ya. N'ọnọdụ ọ bụla, na n'ikpeazụ iji mee ka eziokwu ahụ pụta ìhè na na njedebe nke ụbọchị ọ bụ site na ego ma ọ bụ nchịkọta ego, ma si otú a nata onye nnata ma ọ bụ ndị ọrụ nọ n'ọnọdụ zuru oke iji gaa n'ihu n'ọrụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Kedu ihe na otu Patreon si arụ ọrụ?
Gịnị bụ Clickbait na olee otu o si arụ ọrụ?
Kedu otu esi eme ka ahia di elu na uzo di elu?